[Xogo Xiiso Leh]:-Madaxweyne Biixi Oo Noqday Madaxweynihii Somaliland Ee Ugu Adeegsiga Badnaa Barta Twitterka Iyo Inta Qof Ee Ugu Jirta
Tuesday April 24, 2018 - 13:34:17 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Baraha Bulshada ayaa si xawli ah iskugu badalaya habab sahlan oo ay madaxda dunidu wararka iyo xogaha shaqadooda ugu gudbiyaan shacabkooda. Waxa xiiso gaar ah leh in Madaxweynaha Dalka ugu awooda badan Dunidu, Donald Trump, no
Hargeysa-(Caalami-News)-Baraha Bulshada ayaa si xawli ah iskugu badalaya habab sahlan oo ay madaxda dunidu wararka iyo xogaha shaqadooda ugu gudbiyaan shacabkooda. Waxa xiiso gaar ah leh in Madaxweynaha Dalka ugu awooda badan Dunidu, Donald Trump, noqday madaweynihii ugu saamaynta badnaa ee sida weyn u adeegsaday barta Bulshada ee Twitterka, sannadihii ina soo dhaafay. Barta uu ku leeyahay Twitterku wuxu u addeegsaday in ku daabaco qoraalo maamulo iyo siyaasadeed oo isbedel weyn ku sameeyey hanaanka dawladnimo ee Maraykanka.
Farriimaha loogu gudbiyo bartiisa gaarka ah waa kuwo iskugu jira dhaliil, ammaan, duco iyo tilmaamo kale.Madaxweyne Biixi marnaba kama jawaab celiyo farriimaha khaaska ah ee bartiisa loogu qoro.
Farriimaha ugu badan ee uu Madaxweyne Muuse ilaa iminka sida gaar ah uga helay waa kuwo ay qoraan dad ka faaloonaya arrimaha la xidhiidha doorashadii ka qabsoontay dalka bishii November. Waxa ugu xiiso badan farriintan uu daabacay @rooble2009, oo u dhignayd sidan: " Musharaxa Xisbiga WADDANI oo la hadlay Warbaahintu, waxa uu sheegay in uu aqbalay natiijadii Doorashada, isaga oo tixgelinaya midnimada Shacabka Somaliland…”. Dareenka uu u muujiyey farriintan, waxa ay muujinaysa sida ay kurbada ugu haysay loolkankii doorashada iyo weliba maxsuulkii ka soo baxay.
Siyaasiga keliya ee uu sida tooska ah ula socdo ee ka soo jeeda Somaliland, marka laga tago Madaxweynihii hore ee Siilaanyo, Madaxweyne ku-xigeenka haatan ee Saylici iyo Gudoomiyaha Maxkamadda Sarre waaMaxamuud Xaashi Cabdi. Waa siyaasiin badan lagu xanto in ay ka dhaxayso tartan iyo loolan hoose oo xisbiga Kulmiye hoggaamintiisa ku lug leh. Ma cada sababta gaarka ah ee u xushay in uu la socdo farriimaha khaaska ah ee Maxamuud Xaashi.
Dhanka kale, wadamada sida gaarka ah u xiiseeyo ee Afrika waxa ugu horeeya Dalalka Itoobiya, Jabuuti, Kiiniya, Yugaandha iyo Rwanda. Kuwaas oo in ka badan laba amma saddex barood oo ku saabsan dalalkaas uu si dhaw ula socdo. Tan oo ifafaale ka bixinaysa hab-fakarkiisa siyaasadeed ee la xidhiidha wadamada jaarkaWadanka carbeed ee uu sida gaarka ah u xushay waa dalka Imaaraadka. Wuxu la socdaa Barta Raysal-wasaare ku xigeenka Sheekh Maansuur iyo Rugta Ganacsiga. Ma jiro dal carbeed oo kale oo uu barahooda la socdaa.Mar kale, tan waxa ay inoo muujinaysa sida uu ula dhacsanyahay uguna xidhanyahay dalka Imaaraadka Carabta oo ah dalka keliya ee Carbeed ee ay Somaliland xidhiidho dhinacyo dhawr ah leh yeesheen. Si kale haddii loo dhigo inaanu madaxda dalalka kale ee Carbeed ku xidhnayn waxa iyana loo akhrisan karaa inaanu ka warqabin dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka socda khaliijka iyo guud ahaan dunida Carabta ee aynu bulsho ahaan ku ab-tirsano.